DLULA ISukhoi SuperJet SSJ-100 FSX & P3D - Rikoooo
I-Sukhoi SuperJet SSJ-100 FSX & P3D Inguqulo 2
Usayizi 39.2 MB
Play 6 663
Umbhali: I-AEROPROYECTO (Edgar Guinart López), Umdabu FSX/P3D ukuguqulwa ngu-Rikoooo
Kubuyekeziwe on 26 / 09 / 2019: FSX / FSX-Ukungaguquki okulungisiwe kwe-cockpit ebonakalayo ebingabonakali ngokuya ngesimo sokubuka.
Nakhu okukhethekile kuRikoooo ongowokudabuka kwaSukhoi SuperJet 100 FSX futhi Prepar3D v4. Kunemvume ka-Edgar Guinart López (I-AEROPROYECTO) ukuthi i-Rikoooo iguqule le modeli okwakungokwayo nge-FS2004.
Imininingwane: Le phakethe ifakiwe ne-cockpit ebonakalayo eyi-A321 ye-default FSX futhi iguqulwe nguRikoooo (ayikho i-VC yamahhala ye-SSJ-100 okwamanje), kodwa-ke, i-Panel 2D yileyo ye-SSJ-100 eyenziwe ngu-Edgar Guinart López, kukuwe ukuthi ukhethe, noma ngabe uyandiza e-VC imodi noma i-Advanced 2D Panel mode ye-SSJ-100, noma zombili. Kunoma ikuphi, indiza iyalawuleka ngokuphelele.
Kuhlanganiswe nemisindo evela kusikrini se-SSJ-100, Call Out Sounds, V1 Vr V2 gauge, RCB Groundhandling gauge, FMC, iPhaneli ye-2D isezinguqulweni ezimbili kungaba i-16 / 9 screen noma i-4 / 3. Ukubuyiselwa okuthathu: i-Aeroflot, i-Interjet, emhlophe.
Qaphela ukuthi enguqulweni yePaneli ye-2D isengezo siqala ukungena COLD & DARK imodi, funda ibhukwana ukuze ubambe okuhle kwezinhlelo. Ukuze uqale amabhethri kufanele ususe ukuvikelwa kokuphepha ne inkinobho yegundane kwesokudla, lokhu kubaluleke kakhulu! Ngaphandle kwalokho, ungavinjwa njengamanje, bheka isithombe ngezansi:
Abanye kini bazoshiya amazwana ukusho ukuthi izinjini aziqali kwimodi yePhaneli ye-2D, kodwa cha, ziqala kahle kakhulu uma ulandela okungenani inqubo ebhukwayo noma ngabe FSX or Prepar3D v4 +.
I-Sukhoi SuperJet 100 (isifinyezo: SSJ100, eyaziwa nangokuthi yigama layo langaphambili iRussia Regional Jet noma iRRJ, ngesiRussia: Сухой Суперджет 100) ngumndeni wezindiza zesifunda zenkampani iSukhoi Civil Airl Company (SCAC). Indiza yokuqala yenzeke ngoMeyi 19, 2008.
I-SuperJet 100 kufanele itholakale ezinhlotsheni eziningana ngokuya ngobude be-fuselage yomthamo wokugibela osukela kubagibeli be-75 kuya kubagibeli be-95.
Ku-2014, kwafakwa uhlelo lwebhizinisi leSukhoi SuperJet 100 (Wikipedia)